आख्यान | Infomala
प्रवासमा नेपालीले भोग्दै आएका विकृति–विसंगतिको सजीव चित्र समेटिएको ‘उल्कापात’ उपन्यास बजारमा आएको छ। उपन्यासकार वसन्त नेपालले वैदेशिक रोजगारीको कथावस्तु समेटेर उक्त उपन्यास बजारमा ल्याएका हुन्। लेखक र टिनाबीच अप्रत्याशित भेट, प्रेम र वियोगमा जेलिएको उल्कापात निक्कै मार्मिक छ। आजकाल बाहिरिरहेको युवापुस्ता र रेमिट्यान्समा रमाइरहेको देशको भयावह चित्रण गर्दै उपन्यासमा लेखकले आफ्ना कथावस्तु बुनेका छन्। अरब हामफाल्नु भनेको जिन्दगीलाई आधा बाटोमा…
Comments Off on वैदेशिक रोजगारी र पीडा समेटिएको उपन्यास
एकादेशमा अचम्मै राम्री एउटी युवती थिईन । गाउँ शहरमा उनको रुप र जीउडालको राम्रै प्रशंसा हुन्थ्यो । जवानहरु उनलाई पाउन भुतुक्कै हुन्थ्ये । तर युवती भने तिनीहरुलाई मान्छे नैं गन्दैनथिन । उनलाई आफ्नो रुप र जीउडालमा साह्रै घमण्ड थियो । उनको रुप र घमण्डीपनको दरबारमा पनि चर्चा भएछ । राजाले युवतीलाई दरबारमा नर्तकीको रुपमा जागिर दिए । राजा साह्रै ज्ञानी…
Comments Off on राम्री युवती !
प्रायः सधैं उसैले नै मेसेज गथ्र्यो, अन्तरवार्ता लिन कहिले आऊँ भनेर? तर उनीबाट कहिल्यै स्वीकारोक्ति जवाफ आएन । बरु अरु नै बहानामा अन्य-अन्य मेसेज पठाएर उसको अर्थात अमितको समय मात्र बर्बाद गर्थिन, सँगसगैं आफ्नो पनि समय बर्बाद गर्दथिन् । अमितलाई लाग्थ्यो, एउटा अत्यन्तै प्रतिभाशाली, कला क्षमता भएकी, शारिरीक वनावटले अति आकर्षक ती युवतीको अन्तरवार्ता कभरेज गरेर पत्रिका र अनलाईनमा राख्न…
Comments Off on उनको अन्तरवार्ता (कथा)